Kutheni i-AWS Certification ibalulekile? Umvuzo woMninimzi oPhezulu we-AWS
Kutheni i-AWS Certification ibalulekile? I-AWS yomNcedisi woMcwangcisi oqinisekisiweyo kwiiDola
Yiyiphi ixabiso le-AWS Certification?
Umvuzo woMninimzi oPhezulu we-AWS
Ukuqala kwindlela eya kwi-AWS Certification
I-AWS I-Alds Solutions Certified Architect - Inqanaba lokuBambisana
I-AWS iCrosoft Solutions Certified Architect
I-AWS Umqonkqo oqinisekisiweyo - Inqanaba lokuBambisana
I-AWS eqinisekisiweyo ye-SysOps Administrator - Nxu lumene
I-AWS eqinisekisiweyo ye-DevOps Engineer-Professional (Beta)
Ukufunda okuqhelekileyo ukufumana ukuqinisekiswa kwe-AWS yindlela engafanelekanga yokufumana ukubandakanyeka kwakho ngohlobo lwakho kunye nezoshishino kunye nokwandisa amandla ombutho wakho kunye nezicelo ezisekelwe kwi-AWS. Nangona kunjalo, kukho enye inzuzo engazange ilinganiswe njengokuba kungekudala. Iza ngenxa ye-2015 IT Skills kunye neMvuzo yemivuzo ekhokelwa yi-Global Knowledge kunye ne-Windows IT Pro yafumanisa ukuba ukuhlawula okuqhelekileyo kweziqinisekiso ezine ze-AWS kudlula i-$ 100,000. Nangona kungekho siqinisekiso sokuthi ukuqinisekiswa okulinganayo kumvuzo wesithandathu, ngokuqinisekileyo ayikwazi ukwenza nayiphi na ingozi.
I-AWS Umqonkqo oqinisekisiweyo - Inqanaba lokudibanisa i-$ 137,825
I-AWS iComputer Solutions Solutions - I-Level Level Professional 117,434
I-AWS I-Adware Solutions Solutions - I-Associate level ye-114,935
Umlawuli we-AWS oqinisekisiweyo we-SysOps uMlawuli - iNqanaba lokudibanisa i-$ 108,046
Ikhuphe iqaku le-2016 malunga noko kuthatha ukuthatha ukuqinisekiswa kwe-AWS. (Ivula kwenye iwindow)
Ukuqinisekiswa kwe-AWS (kunye ne-AWS ukulungiselela) iiprojekthi ezisekelwe kwiinkqubo ezijoliswe kumalungiselelo abaqulunqi, abavelisi kunye nabaphathi bee-frameworks. Ngaphakathi kuzo zonke iindawo, iziqinisekiso kunye nenqanaba lobuchule liqinisekiswa. Ngoxa ukulungiswa akudingekile ngaphambi kokuzama ukuhlolwa kokuqinisekisa, kuphakanyiswe ngokukhethekileyo.
Oku kuqinisekisiweyo kuvuma ukuba unamava okusebenzisa izandla usebenzisa i-AWS ukucwangcisa okufikelelekayo, ixabiso-mali, ukusola iinqununu ezixhasayo kunye nezixhaseneyo. Iqinisekisa ubungqina bakho ukuhlukanisa nokubonisa iimfuno ezifunekayo kwisicelo esisekelwe kwi-AWS kwaye uthathe iiprogram ezamkelekileyo zokwakha izicelo ezikhuselekileyo neziqinileyo kwisigaba se-AWS.
Ukulungiswa okulindelekileyo: Ukuqulunqwa kwi-AWS
Esi siqinisekiso siyavuma ukuxhobisa iimpawu ezizodwa kunye nokubandakanyeka ekuchazeni izicelo ezikhoyo kunye nezikhokelo kwisigaba se-AWS.
Ukulungiswa okumiselweyo: UkuPhakamisa okuPhambili kwi-AWS
Olu bhengezo lwamkela ubuchule bakho obukhethekileyo ekuphuhliseni nasekugcineni izicelo kwisigaba se-AWS. Iimvavanyo iimvavanyo zakho ingqiqo kwiingcamango ezilandelayo:
Ukuthabatha i-AWS iinkonzo ze-AWS.
Ukusebenzisa ii-SDW ze-AWS ukunxibelelana neenkonzo ze-AWS kwisicelo sakho.
Ikhowudi yokudibanisa ephucula ukuphunyezwa kweenkonzo ze-AWS eziqeshwe ngumqeshi wesicelo sakho.
Ukhuseleko lwezinga lomgangatho wesicelo (i-parts ze-IAM, izatifikethi, ukubhalwa kwe-encryption, njalonjalo.)
Ucetyiswa ukulungiselela: Ukuphuhlisa kwi-AWS
Izikhokelo zoLawulo lweZiseko
Oku kuqinisekisiweyo kuvumela amava akho okubonelela, ukusebenza kunye nokugcina izikhokelo ezisetyenziswa kwi-AWS. Iqinisekisa ubungqina bakho ukuhlukanisa nokuhlanganisa izinto ezifunekayo zokubonisa impendulo ekufuneka yenziwe kwaye isebenze kwi-AWS. Iyakwamkela ngokufanelekileyo amandla akho okunika imisebenzi ye-AWS kunye nesilathiso socwangco kwaye unika umgangatho ophezulu kuzo zonke i-life cycle of venture.
Ukulungiswa okumiselweyo: Iinkqubo zoMsebenzi kwi-AWS
Olu bhengezo lwamkela ubuchule obukhethekileyo ekuboneleleni, ukusebenza kunye nokujongana nezikhokelo zesicelo esikwi-AWS.
Ibhola inkundla yakho
Ngethuba elihle lokuba uqala nje nge-AWS, indlela eyinqaba yokufumana iinyawo zakho ezimanzi yinkqutyana yokurekhoda kwamarekhodi kunye neelabhu ezifumaneka kwiziko le-AWS. Ikhosi lethu le-AWS Essentials liyakukunceda ngokunjalo ukuba uthabathe i-AWS ngaphambi kokuba ushiye ngendlela yokuqinisekisa.
Yintoni isatifikethi se-AWS?